Ireo dobo voajanahary tsara indrindra eto amin'ny firenentsika. Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | Tanànan'ny Espana
Espana dia firenena mifanipaka, an'ny fahasamihafana ara-kolotsaina, tontolo, tontolo iainana ary koa ny fahasamihafana gastronomika. Tsy fantatsika tsara raha aleontsika ny toerana misy ny tendrombohitra na mijanona anaty rano ao amin'ireo morontsiraka mahafinaritra. Ary ho an'ireo izay tsy tia manangom-pifandraisana amin'ny fasika, azon'izy ireo atao koa ny mankafy eto amin'ny firenentsika dobo voajanahary mahafinaritra ... Izany hoe, Espana dia firenena izay tsy maninona izay alehanao amin'ny fialan-tsasatra ary iza amin'ireo no mahafinaritra azy zorony tianao hijerena… Tena ho tianao izany!
Fa anio, amin'ity lahatsoratra ity dia tianay ny hatolotra anao ny dobo voajanahary tsara indrindra eto amin'ny firenentsika. Amin'izay mba? Satria na dia betsaka aza ny tanànan'ny tanety izay tsy manana moron-dranomasina, dia tsy manana fialonana amin'ny morontsiraka izy ireo, satria manana dobo rano voajanahary tsara tarehy toa ireo izay ho hitantsika eto. Raha te hilomano tsara ianao amin'ity fahavaratra ity nefa tsy manana moron-dranomasina akaiky ianao dia aza manahy! Angamba akaiky anao ireo dobo voajanahary ireo ...
3 Loharano mafana Orense (Galicia)
4 Reservoir San Juan (Madrid)
Punta de Sa Pedrera any Ibiza Io no pisinina voajanahary mahazatra izay voahodidin'ny lalana vato sy vato miforitra, raha ny marina dia amin'ny alàlan'ny lalana voahodidin'ny dongona sy ala.
Toerana tsara hialana sasatra ary ny teboka ratsy fotsiny dia ny tsy fisian'ny toerana hametrahana elo na kofehy hanome alokaloka. Ka raha avy any Ibiza ianao dia te handositra kely ny valalabemandry ary mitady toerana mitokana sy mangina ianao, ity dobo voajanahary ity no mety toerana mety indrindra.
Raha tsy nanana ny ampy tao Cáceres izahay niaraka tamin'ny Lohasahan'i Jerte, ity faritra ity koa dia manambara ny faritra fantatra amin'ny hoe Garganta de los Infierno Natural Reserve. Mampiavaka azy ny riandrano, ny Dobo voajanahary 13 na pylons vokatry ny fikaohin'ny riaka tao amin'ny granita sy ny riandrano.
Ka raha any Cáceres ianao ary misy andro mafana be (izay azo antoka fa hisy) dia efa manana toerana handroana tsara ianao ary hialana sasatra rehefa mankafy tontolo voajanahary tsara tarehy.
Loharano mafana Orense (Galicia)
Any am-paran'ny Renirano Miño ary manaraka ny fizaran-tany efatra kilometatra dia ahitantsika andian-doharano mafana misokatra. Ireo loharano mafana ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe The Pozaas A Chavasqueira, Muiño das Veigas, Outariz ary Burgas de Canedo. Ireo dia feno rano izay mivoaka avy any afovoan'ny tany amin'ny hafanana mihoatra ny 60 degre, noho izany dia tsara izy ireo na dia amin'ny vanim-potoana mangatsiaka kokoa toy ny fararano sy ririnina aza.
Ny fandroana ataon'izy ireo ao anatin'ireny loharano mafana ireny dia mahasoa ny fahasalamanao satria ampiasaina hanasitranana aretin-koditra isan-karazany izy ireo ary koa ny olana amin'ny taolana toy ny aretin-tratra na rheumatisme.
Reservoir San Juan (Madrid)
Ity fitehirizam-bokatra ity dia any amin'ny faritanin'i Madrid, tsy misy zavatra hafa ary tsy ambany noho ny 10 kilometatra ny morontsiraka. Ary io ve, iza no nilaza fa tsy misy moron-dranomasina any Madrid? Tsy ho morontsiraka tahaka izany, fa ny fitehirizan-drano San Juan dia misy an'ny mponina ao Madrid sy ny mpizahatany. Any amin'ny tanànan'ny San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros ary Pelayos de la Presa, manokana any amin'ny farany atsimo andrefan'ny Community of Madrid sy atsimo atsinanan'i Avila.
Io irery no honahona any avela ny hetsika fandroana sy moto.
Ity riandrano voajanahary voajanahary ao Cuenca ity dia tsy isalasalana fa tontolo hafa. Misy rapid, gorges ary riandrano izany dia miafara amin'ny dobo kely na dobo voajanahary amin'ny rano turquoise manaraka ny sasany Metatra 300 mandritra ny renirano Cabriel.
Raha te-hitsidika azy ireo ianao dia mila mankany amin'ny tanànan'i Tariho izahay ary avy eo afaka mandeha manakatra azy ianao na manohy mitondra fiara mandritra ny fotoana fohy. Raha sahy mandeha an-tongotra ianao dia tokony ho fantatrao fa maharitra 4 ora ny lalana ka tsy mavesatra loatra amin'ny lanja ianao. Mitaova lamba famaohana fotsiny ary avy mandro rehefa avy nandeha tsara.
Handeha amin'ny iray amin'ireo dobo voajanahary ve ianao amin'ny fahavaratra? Raha eny ny valiny, zarao aminay rehetra ao amin'ny faritra misy ny hevitra ny zavatra niainanao. Milentika tsara!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ireo dobo voajanahary tsara indrindra eto amin'ny firenentsika
Venice dia hametra ny fidirana amin'ny kianjan'i St. Mark's